Dhismaha Taariikhda ee TCDD ee Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDhismaha Taariikhiga ah ee TCDD ee Ankara
25 / 08 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Dhismaha taariikhiga ah ee tcdd ee magaalada ankara lama iibinayo
Dhismaha taariikhiga ah ee TCDD ee Ankara waxaa lasiiyay Jaamacada Medipol, oo uu aasaasay Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca. Tani miyaanay ahayn arin kiro ah? Markaan fiirino weerarada lagu hayo dhismayaasha xambaarsan raad raacyada jamhuuriyadeena, waa la arki karaa in taasi aysan aheyn kiiska.
JamhuuriyaddaSida uu sheegayo warka Mufit Akyos; Wadnahaygu waa xiiray markaan aqriyay warkan oo ku saabsan Xariirka jamhuuriyada jamhuuriyada ee 27 July. Anigoo ah ilmo aabbe tareen oo duug ah oo ku noolaa Ankara, kama fikiri karin xusuusta igu dhacday maskaxdayda. Waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku yimaadda waa safarrada 36-38 saacaddii Ankara-Erzurum ee aan ku sameysanno tareennada uumiga ku dhawaad ​​sannad kasta. Kadib, safarrada u dhexeeya Ankara iyo Istanbul ee leh Bosphorus Express. Ogaanshaha ma ahan oo keliya dhismaha saldhigga laakiin sidoo kale ku dhawaad ​​dhibic kasta oo isku dhafan oo la dhisay illaa da 'dugsi sare ayaa ah isha laga helo kacdoonka sii kordha ee gudaha. Mowqifka iskaashiga shaqada ee TCDD ee dhaqaalaha gurigayaga, adeegyadii aan ka helnay dhakhaatiirta yar yar ee caafimaadka, buugaagta buugaagta ee adag ayaa aabbahay wuxuu ii kaxaystay maktabadda hay'addu xagaagii, saqafka aad u sareeya iyo marmar dusheeda oo la dhigto dhismaha saldhiga, saacadaha waa weyn ee ka laalaadayo sagxadaha, saacadaha diyaarinta tababarka tareenka. halista shaqaalaha xakameynaya giraan kasta oo leh dubbe yar oo gacan-yari ah, qaab-dhismeedka alwaax loogu talo galay ee qolalka sugitaanka, cabirka idaacadda, quwadda mashiinka cajiibka ah ee ay ka muuqato qulqulayayaasha cad-cad ee ka soo tuuraya aagagga, miisaska cad-cad ee makhaayadda ee aan cuni karay da'da jaamacadda, wax walba oo ku saabsan safarka. Waxaad ka heli kartaa buffet-ka saldhiga, xamuul shaqaalaha ka shaqeeya, qeybta martigelinta rakaabka qaaska ah waxaan daaqadaha ka fiirineynaa wax xiiso leh, saldhigga cas-cas ee gacanta saldhiga wuxuu ka tarjumayaa awoodda chef iyo dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay ee guuxa gawaarida si uu u jiido tareenka weyn markii uu yimid tareenka oo kor u qaaday gacantiisa hav.
Dabcan, waxaa jira xusuus badan oo ay tahay in la qoro oo lagu faahfaahiyo, laakiin wararka kor ku xusan waxay ku daboolayaan dhammaantood sida daruur madow. Si kastaba ha noqotee, saxafiga dhabta ah Çiğdem Toker wuxuu horey noogu sheegay inay ku jiri doonaan maqaalka 1 bisha Juun 2018 maqaalka cinwaankiisu yahay k yaa kiraysan doona Xarunta Ankara? ”. Sida ku xusan qodobka, “borotokoolka saddex geesoodka ah ee ay kala saxiixdeen Wasaaradda Maaliyadda, TCDD iyo TOKI ee 13 March 2018” ayaa la bilaabay.
Dayactir deg deg ah
Lagu sameeyay 1928 iyo 2 Tareenka Gobolka. Dhismaha taariikhiga ah, oo loo adeegsaday Agaasinka Maamulka Ganacsiga, oo markii dambe loo rogay guri marti ah, ayaa la siiyay Jaamacada Medipol, oo ah dhisme iyo xanaano halkaas oo ay ku hareen carruurta tareenka taayirrada ah ee tacliinta sare. Dhismooyinka ayaa diyaar u ah in loo isticmaalo dayactir deg deg ah.
Laga soo bilaabo wixii aan soo arkay, weligeed ma noqonin dhammaad-dhaaf aan dhammaaneyn oo dhammaan sharafdarrada, ixtiraam la'aanta, hunguri-darrada ee Porto Station, saldhigga Paris, Saldhigga Dhexe iyo wixii la mid ah, kuwaas oo wali loo adeegsado taayirrada darbiga. Tani miyaanay ahayn arin kiro ah? Markaan fiirino weerarada lagu hayo qaab dhismeedka raad raacyada raadadkii Jamhuuriyadeenna ee Ankara rubuc qarnigii la soo dhaafay, waa la arki karaa in taasi aysan ahayn xaaladdu. Tani waa tusaale kale oo ku saabsan burburka la taaban karo ee kuwa doonaya inay si toos ah u burburiyaan Jamhuuriyadda iyo qiimaheeda iyagoo burburinaya dhismayaasha loo arko inay yihiin astaanta casriyeynta Jamhuuriyadda cusub ee ka taagan axdiga Ulus-Çankaya. Nasiib darrose, dawladda hoose ee Ankara, oo aan ku gacan sarrayno wareejinta, ayaa qayb weyn ka leh sharkan wixii ku dhacay caasimadeena rubuc qarnigii la soo dhaafay.
Halkaa marka ay marayso, howsha ugu horeysa waxay ku dhacdaa kuwa la wareegaya maamullada maxalliga ah ee Ankara isla markaana isu tixgeliya Republican. Hawshani waxay ugu horrayn si taxaddar leh u ilaalinaysaa dhammaan raad-raacyada ku yaal caasimadda Ankara iyo, haddii ay suurogal tahay, in lagu beddelo kuwii lumay. Hawshaas dabcan waxay u baahan tahay waddaniyad iyo khibrad. Sidii had iyo jeerba, waxaan xaq u leenahay inaan ka fileynno TMMOB iyo Rugta Architects inay noqdaan taageerayaasha ugu weyn iyo kuwa raacsan arrinta qibradooda.
muddo War National Liberation iyo ka dib, ka baxsan image ee magaalo yar, size saldhigga, goobjoog aasaasay Jamhuuriyadda, taas oo Ankara tareen Station, Turkey cusub ka shaqeeya ee Wasaaradda Hawlaha Guud ee ammaan si ay u muujiyaan heer 15 sano si go'aan looga gaaro in a sano 25 saldhiga adag dhise dhallinyaro ah, Þekip Sabri Akalın. Dhismaha 4 Maarso ayaa ka bilaabatay 1935 30 Oktoobar oo lagu dhammeeyay 1937. Ka dib markii ay "Capital Jamhuuriyadda Turkey" akhriyey cutubka muhiim ah in taariikhda of our Republic ay sabab u dhidibka ee idaacadda, iyo waxa suurto gal ah in ay qoraan. Iyada oo la bililiqaystay lacagtan, kalsoonidii saldhigga tareenka ayaa la baabi'iyay.
Qaab dhismeedka noocan oo kale ah, kaas oo xambaarsan raad raacii hore ee la soo dhaafay, xasuuqii tareenka dhiig-karka (10 Oktoobar 2015), iyo xaqiiqda ah in qaab-dhismeedka noocan oo kale ah ee 'raad-raaca' ka-noqoshada cusbitaalka gaarka loo leeyahay loogu wareejiyo Wasaaradda Caafimaadka (Madaxweynaha TBMM) dhegaha layisku) waa in aan la filayaa in la aqbalo mid ka mid ah muwaadiniin waddaniyiin ah ee Jamhuuriyadda Turkey.
Maanta Taariikh: May 11, 1939 Maamulka Tareenka Gobolka
Shil gaari oo ka dhacay Malatya: "Shilalku waa lama huraan illaa iyo inta ay siyaasaddani sii socoto"
Saddexda xarumood ee TCDD ee Karabuk ayaa lagu iibiyey 21 Milyan TL!
Iskaashiga Shaqaalaysiinta ee TCDD
waa been in saldhiggii hore iyo agagaarkiisa laga iibiyey jaamacad aasaasi ah.
kaas oo aan la iibin kadib qoondaynta.